News Archives - Page2of 91 - Media Nepal
स्कुलका शिक्षक र साथीसहित हाइकिङ गएका १७ बर्षीय जोन तामाङ ६ दिनदेखि हराइरहेको खबर पाएपछि ‘रेस्क्यू थ्री साउथ एसिया’का १८ जना उद्धारकर्तासँगै क्षेत्रीय निर्देशक चन्द्र आले बुधबार बिहन फूलचोकीको डाँडामा पुगे । सकुशल उद्धार गर्न सकिए हुन्थ्यो भन्ने मनमा गहिरो चाहना र अठोटसहित चन्द्र र उनको टिमले बुधबार विहानैदेखि जंगल चाहार्न सुरु गर्यो। जोनलाई सकुशन उद्धार गर्न सकिएला ? चन्द्र …
नेपालका प्रधामन्त्री जाँदा राज्यमन्त्रिले स्वागत गर्ने भारतलाई दियो नेपालले गतिलो जवाफ
दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा अपराह्न काठमाडौं आइपुगेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई अर्थ राज्यमन्त्री उदयसम्शेर राणाले स्वागत गरेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्दै अर्थ राज्यमन्त्री राणा । तस्बिर: भारतीय विदेश मन्त्रालय अपराह्न साढे ४ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएकी स्वराजलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थराज्यमन्त्री राणाले स्वागत गरेका हुन्। राणाका साथमा भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी, भारतीय दूतावासका कर्मचारीले …
प्राकृतिक प्रकोपले १४ करोड नागरिक प्रभावित भएको मन्त्रालयले वेभसाइटमा प्रकाशित गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण ५२ लाख ५० हजार नागरिक विस्थापित भएका थिए भने १७ लाख चिनियाँलाई आपतकालिन सहयोगको खाँचो परेको थियो । झण्डै एक लाख ५३ हजार घरमा क्षति पुगेको छ भने तीन लाख १२ हजार घर नष्ट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगत पाँच बर्षको तुलनामा सन् …
बर्षौ देखी कपाल र दाह्री नकाटेका पूर्वयुवराज पारश एकाएक झुल्किए गुहेश्वरीमा
नेपालमा भएतापनि पूर्व युवराज पारश शाह प्रायः गुमनाम देखीन्छन् । केही महिना यता पारश सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थानहरुमा समेत सक्रिय छैनन्। खवरअनुसार हिमानी र उनको सम्बन्ध सुमधुर हुननसकेको कारण उनी एक्लै सुनाकोठीस्थित निवासमा बस्ने गर्दछन् यिनै पारस मंगलबार राजधानीको गुहेश्वरी मन्दीर परीसरमा झुल्किए। पारसको हाउभाउ हेर्दा लाग्थ्यो बर्षैा देखी कपाल र दाह्री काटेका छैनन् । उनी आफ्ना केही सहयोगीहरु …
आज १ सय ५२ वर्षपछिको दुर्लभ खगोलीय घटना, कुन राशीलाइ कस्ताे फल
माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुधबार बेलुकी खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने भएको छ । माघ १७ गते बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाउने र बेलुकी ६ बजेर ३६ मिनेटमा इशान कोणबाट ग्रहणले छुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणको मध्यकाल ७ बजेर १७ मिनेटमा हुनेछ । आठ बजेर ५७ मिनेटमा पश्चिमबाट ग्रहणको मोक्षकाल हुने अर्थात् ग्रहण सकिने समितिका अध्यक्ष …
८ वर्षे बहिनीलाई १६ वर्षे दाईले बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि !
January 29, 2018	Comments Off on ८ वर्षे बहिनीलाई १६ वर्षे दाईले बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि !
खोटाङ , खोलाको बगरमा गाडिएको अवस्थामा फेलापरेको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाकी आठ वर्षीया बालिका लुमणी भनिने ब्रिस्मा राईलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि भएको छ । गत माघ १० गते राति स्थानीय चिम्चीमा खोलाको बगरमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेकी उनलाई सोही स्थानका १६ वर्षीय जीउधन राईले बलात्कारपछि हत्या गरेर ढाकछोप गर्न खोलाको बगरमा गाडेको पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनालगत्तै …